Wal-danqaa Paarlaamaa Somaaliyaa Keessatti Uumame
Faayilii - Paarlaamaa Somaaliyaa, Moqaadishoo, Fulbaana 23,2020
Paarlaamaan Somaaliyaa erga deggertoonni mootummaa fi miseensonni mormitootaa ajandaa dhiyaate irratti walii galuu dhabanii booda sambata darbe wal ga’iin isaa addaan cite jira.
Manni imaree bakka bu’oota uummataa sun waa’ee COVID-19 irratti mari’ata jedhamee eegamus, miseensonni mormitootaa ajandaan sun dhimma yeroon hojii dheereffamuu prezidaant Mohaammed Abdullaahimm Mohammed kan Farmajoo jedhamuun beekamaniis of keessaa qabaachuu qaba jedhan.
Afaan-yaa’iin Paarlaamaa Somaaliyaa, Mohaammad Mursaal Sheek, walga’iin paarlaamaa Somaaliyaa isaaniin hoogganamuuf ture eega miseensota paarlaamichaa ka garee mormitootaatiin jeeqamee booda, walga’ichi akka dhaabbatu beeksisanii cufan.
Afaan yaa’ii fi miseensonni paarlaamaa garee mootummaa tahan, walga’icha irratti yeroon mootummaa prezidaantii biyyattii, kan Mohaammad Abdullaahii Mohaammad akka dheeratu murteessisuuf karoorfatanii turan, jedhan – mormitoonni.
Miseensonni Paarlaamaa mootummaa prezidaantichaa deggeran kanneen akka Hanii Mohaammad Adan immoo kan mormitoonni jedhan kana ni haalan.
Itiyoophiyaan Qajeelfama Koovid 19 Ittisuuf Baaste Akka Hojiirra Oolchitu Beeksiste